वि.सं. २०७५ वैशाख १ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अप्रिल १४ तारिखको राशिफल पढ्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > वि.सं. २०७५ वैशाख १ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अप्रिल १४ तारिखको राशिफल पढ्नुहोस
भोलि्को दिन तपाईको दिन तपाई अनुकुल बितेर जाने देखिन्छ भने भोलि तपाईको हरेक कार्य सफल रहन सक्ला। भोलि तपाईलाई आर्थिक लाभ मिल्न खासै गार्हो पर्ने देखिन्न। लक्ष्मीजीको अनुग्रह तपाईमा रहन सक्ला। परिवारका सदस्यहरु मिठो पल व्यतित रहला। भोलि स्वास्थ्य पनि राम्रो रहला।
भोलि तपाईमा मानिसक चिन्ता बढेर जाने देखिन्छ भने भोलि तपाईलाई सानो सानो कुराले पनि समस्या बढाउन सक्ला। भोलि तपाईलाई आँखा सम्बन्धी समस्याले सताउने देखिन्छ। तर भोलि तपाईले दुर्घटनाबाट भने बच्नु पर्ने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई खर्चले साझ सताउन सक्ला। परिवारमा शान्त वातावरण रहन सक्ला।
भोलि तपाईमा शारीरिक मानसिक स्वस्थताको अभाव हुने देखिन्छ। पारिवारिक सदस्यहरु संग उग्र बहसको सम्भावना देखिन्छ भने भोलि तपाईको व्य्वासाहिक हिसाब बाट पनि भोलि तपाईको दिन खासै लाभयुक्त देखिन्न। भोलि तपाईको प्रेम सम्बन्धमा पनि बाधा देखा पर्ने देखिन्छ भने भोलि शिक्षा प्रति तपाईको लगाभ घटेर जाने देखिन्छ।
भोलिको दिन तपाईको धेरै आरामदायक रहने देखिन्छ। भोलि तपाईको परिवारमा शान्त वातावरण रहने देखिन्छ भने भोलि तपाईलाई परिवारबाट भने जस्तै साथ र सहयोग मिल्ने देखिन्छ। भोलि तपाईले साथी-भाइ संग मिठो समय व्यातिर गर्ने अवसर पाउनु हुने दिन परेको छ। भोलि तपाईको आर्थिक लाभ भन्दा पनि खर्च बढेर जाने देखिन्छ।
भोलिको दिन तपाईको माध्याम फलदायी रहन सक्ला। भोलि तपाईको दिन आर्थिक मामलामा राम्रै हुने भएता पनि भोलि तपाईको स्वास्थ्यको हिसाबले खासै राम्रो रहने देखिन्न। भोलि तपाईको धार्मिक तीर्थ सफल रहन सक्ला भने भोलि तपाईको मानसिक विघटन समेत हुने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई परिवारबाट पनि सहयोग मिल्ने देखिन्छ।
भोलि नयाँ कार्य थालनी नगरेकै उचित रहन सक्ला। भोलि तपाईले हरेक कार्य गर्दा संयम रहनु पर्ने देखिन्छ भने भोलि तपाईको बोलीको कारण तपाईको बन्न लागेको कार्य पनि विफल रहने देखिन्छ। भोलि सकेसम्म कम बोलेकै उचित रहने तपाईको दिन अनावश्यक खर्चहरूले ग्रसित रहन सक्ला।
भोलिको दिन तपाईको मनोरन्जन केन्द्रित रहन सक्ला। भोलि तपाईको व्यापारमा मनग्गे फाइदा मिल्ने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई व्यवसायमा घर-परिवारबाट पनि भरपुर सहयोग मिल्ने देखिन्छ भने भोलि तपाईको व्यवसायको लागि यात्रा पनि हुन सक्ला। भोलि तपाईको शैक्षिक क्षत्रमा पनि उन्नति रहने देखिन्छ। भोलि तपाईको नबनेका कार्यहरु सम्पन्न हुने देखिन्छ।
भोलि तपाईलाई कानुनी सफलता साथै अध्ययनमा पनि एस् सफलता भोलि मिल्न तपाईको सक्ला। बौद्धिक,तार्किक विषयमा निपुर्नाता बढेर जाने देखिन्छ। भोलि तपाईक प्रतियोगिताहरुमा भएको सहभागिता अर्थपूर्ण रहने देखिन्छ भने भोलि तपाईको कम क्षत्र प्रतिको रुचि पनि बढेर जाने देखिन्छ। भोलि तपाईको स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउने देखिन्छ।
भोलि तपाईलाई आर्थिक समस्याले पनि सताउन सक्ला। भोलि तपाईमा शारीरिक मानसिक स्वस्थताको अभाव हुने देखिन्छ। पारिवारिक सदस्यहरुसंग उग्र बहसको सम्भावना देखिन्छ भने भोलि तपाईको व्य्वासाहिक हिसाब बाट पनि भोलि तपाईको दिन खासै लाभयुक्त देखिन्न। भोलि तपाईको प्रेम सम्बन्धमा पनि बाधा देखा पर्ने देखिन्छ।
भोलि तपाईमा एकाग्रताको कमि रहन सक्ला। भोलि तपाईलाई आलस्यताले समेत सताउन सक्ला। भोलि तपाईमा थकान बढ्ने देखिन्छ। भोलि तपाईको सामान्य कार्य सफल गराउनको लागि पनि तपाईले कडा मिहिनेत गर्नु पर्न सक्ला। भोलि तपाईले खान-पानमा पनि ध्यान दिनु होला। सरकारी कार्यमा संयम रहनु होला भने भोलि मान हानी नहोस भन्नको लागि सजक रहनु होला।
भोलि तपाईको निर्धारित कार्य सजिलै सम्पन्न हुन सकने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई सफलता मिल्न खासै मिहिनेत गर्नु नपर्ला। भोलि भोज-समारोहमा सरिक हुने समेत तपाईलाई अवसर मिल्न सक्ला। नयाँ लुगा, आभूष तथा सवारीको लागि भोलि तपाईको खर्च रहने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई व्यवसायमा पनि राम्रै सफलता मिल्न सक्ला। मानसिक अवस्था आनन्दित रहन सक्ला।
भोलि तपाईको भोलि धार्मिक यात्राको योग रहेको छ भने भोलि तपाईको घरमा पनि धार्मिक कार्यक्रमको आयोजन हुन सक्ला। विदेशी यात्राको लागि अनुकूल संयोजन रहन सक्ने तपाईको भोलिको दिन व्यवसायिक तवरबाट भने खासै उपलब्धिमुलक नरहने देखिन्छ।जागिरेहरुको भने भोलि भाग्य वृद्धिको योग देखिन्छ।